Betroka – Midi Madagasikara
Betroka : Olona enina maty, roa hafa naratra mafy
Redaction Midi Madagasikara 13 mars 2014 Betroka
Tsy mbola milamina ny any Betroka hatramin’izao ary manjaka tokana ny malaso. Tamin’ity herinandro ity dia olona enina no maty voatifitra, ka tompon’omby ny iray. Mpivady roa kosa no naratra mafy voan’ ny bala, afak’omaly. Ramatoa tapa-tanana, rangahy nipotsaka tsinay, hoy ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana. Ny alarobia teo tany Soanala dia mpanangom-bokatra iray…
Betroka : Hisy ny fisavana manomboka amin’ny 9 ora sy sasany alina
Redaction Midi Madagasikara 24 janvier 2014 9 ora sy sasany alina, Betroka, fisavana
Noho ny tsy mbola fisian’ny fandriampahalemana vanona any amin’ny distrikan’i Betroka, faritra Anosy ary mahazo vahana amin’izao ny asan-jiolahy sy vaky trano nanomboka ny taona 2013 no mankaty dia nanapakevitra ny mpitondra any an-toerana fa hanamafy ny fisafoana ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny alina manomboka izao. Hosavaina avokoa ireo olona mbola eny an-dàlana manomboka amin’ny sivy…